IBM inoita yekutenga kukuru munhoroondo yayo mushure mekuwana Red Hat | Linux Vakapindwa muropa
IBM, iyo hombe yebhuruu komputa yakagara ichibatikana kwazvo muLinux nyika, muchokwadi vanga vari vanogadzira vanogadzira kernel uye vanoramba vachipa kusimudzira nemari kuchirongwa. Zvakanaka ikozvino zvichave zvakatonyanya saka mushure mekuvhara chii chichava chikuru kutenga mune nhoroondo ye IBM mushure mekuwana iyo Red Hat kambani. Kunyangwe chibvumirano chisinga nyatso kuve 100% chinoshanda kusvika hafu yechipiri yegore rinouya, ndiko kuti, kusvika mwedzi yekupedzisira ye2019.
IBM yakazvisimbisa nhasi, yasvika pachibvumirano ichi chekutenga hofori yekuAmerica yeheti tsvuku pasina chinhu chiri pasi 34.000 mamiriyoni emadhora, nhamba inosanganisira chikwereti. Izvi zvinoita kuti IBM ive kambani inochinjika, ichiwana zvese zveRed Hat uye zvigadzirwa izvo zvino zvizove chikamu cheIBM chinopa kuwedzera mumatanho matsva senge gore, nezvimwe. Tichaona zvinoitika kuRHEL distro mushure mekutenga uku, kunyange isingafanire kukanganisa ... Sezvo ivo vakasimbisa kubva kune zvirevo zvatakakwanisa kuona: «IBM kuva wepasi rose # 1 musanganiswa wegore tekinoroji mupi, ichipa makambani mhinduro yega yegore yakavhurika iyo ichavhura iyo yakazara kukosha kweiyi tekinoroji kumabhizinesi avo.«. Izvi zvinoreva kuti makambani ari vatengi veIBM mhinduro anokwanisa kufambisa ese mabhizinesi ekushandisa kune iro gore nenzira yakachengeteka. IBM neRed Hat ichave yakasimba kuti igadzirise izvi uye nekumhanyisa kugamuchirwa kwemazhinji emakore akasanganiswa emakore.
Mukutaura, mushure mekuverenga izvi hazvizokanganisa iyo Red Hat brand sekuziva kwedu izvozvi, uye vese IBM neRed Hat vacharamba vakazvipira kuvhura sosi sezvavave kuita kusvika zvino. Iwo makambani maviri akashanda pamwe chete kweanopfuura makore makumi maviri apfuura, asi ikozvino iko kubatana kuchaswedera. Pari zvino ndipo pavachave nani chinzvimbo chekupa masevhisi uye anokwikwidza Microsoft Azure uye AWS (Amazon Web Services).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » IBM inoita yekutenga kukuru munhoroondo yayo mushure mekuwana Red Hat
Ndinovimba vanoita zvakanaka, kubva kuIBM ini ndagara ndiine mareferenzi akanaka kwazvo
NaMwari, IBM ikambani hombe iyo muma90's yakapa chihomwe hurumende dzeLatin America kuti dzishandise IBM pc-'s.
Pindura kuna FrankDJ